Tricks Kubva Semalt On Nzira Yokubvisa Zvakaipa Sei?
Bot motokari inokwanisa kukanganisa kudhura kweGoogle Analytics (GA), kushatisa kushanda kwewebsite, kubhadhara mari yekuchengetedzwa kwewebsite nekuendesa kune pfungwa dzenhema. Vazhinji vashandisi vanotenda kuti bot traffic haigoni mawebsite avo. Zvisinei, zvidzidzo zvitsva zvinoratidza kuti makumi matanhatu kubva muzana emawebsite anogona kuenzaniswa ne bots. Panyaya iyi, zvakakosha kunzwisisa nzira dzekucherechedza bhutiro rekushambadzira kuudza data zvakarurama.
Muchikamu chino, Lisa Mitchell, Mutengi Wekugutsikana Kwevatereji Semalt , anotaura zvimwe zviito zvinogona kushandiswa kuongorora bhoti muGoogle Analytics (GA) nheyo uyewo nzira dzokubvisa bots kushandiswa kwezvinosvina uye dzimwe nzira dzakataurwa. Uyezve, inokosha inyanzvi yemabhizimisi inofanirwa kuteverwa pamwe chete neGG filters inokurukurwa - luso del flash en fotografia.
Izvi zvinotevera mapeji anokosha kutarisa kunze kweGAP mishumo inobatanidza ne bots:
Kupera kwemavhareji kwenguva yega yega.
Nhamba yepamusoro yekukwikwidza.
Anoda kusvika 100% motengesi nevashanyi vatsva.
Pasi pechikamu che "Admin", mumwe munhu anogona kugadzira "tarisa" zvirongwa nekuongorora bhokisi rekubvisa mabhuku anozivikanwa. Nyanzvi dzeInternet dzinokurudzira kuti vashandisi vanofanira kuvaka chiedza chekuedza pakutanga pakutanga kuitira kuti vaone migumisiro yakagadziriswa vasati vashandisa kumeso makuru. IA ABC / IAB International Bots uye Tsvakurudzo Dhesi yezvinyorwa zvinotsvaga kubvisa mabhoti asina kuwanika munharaunda yevanhu.
Kushandiswa kweMushandi Wemagetsi uye IP Address
Sarudza Bhuku reMotokari
Zviitiko zvizhinji zvemabhizimusi zvinogona kuteverwa kunze kweG GA, somuenzaniso, CAPTCHA service. Sekambani, Google yatanga basa idzva reCAPTCHA yakakurumbira inonzi "Hapana CAPTCHA." Iyi shumiro inogona kuona hutsika hwevanhu, sekushandiswa kwemushonga uye kuita sarudzo zvichienderana nemabasa akadaro. Kuwedzerwa kwemutsara nokuda kwezvikonzero zvekuongorora ndeyekusashandisa munyaya iyi. Nguva dzose kana munhu anoshanyira peji yepawebhu kwekutanga, "Hapana CAPTCHA" basa rinoratidzwa kumunhu. Gwaro reGoogle Analytics (GA) rinofanira kubudiswa mushure mekupedza basa reCAPTCHA. Pakupedzisira, chikwata chekugovera chinogona kugadziridzwa mushure mekugadzirisa, uye chinofanira kusabvisa vazhinji bhoti yepamusoro inopinda site. Nzira yekutevera inogona kugadziriswa nekupa fomu inokumbira maiero e-email kubva kuvashandi pakutumira kushandiswa kwekubatisa mukati maawa 24.